दाइजो नपाएको भनेर दिनहुुँ मानसिक तथा शारिरिक तनाव दिएपछि झापाकि युबतिले गरिन आत्महत्या – Khabar Patrika Np
दाइजो नपाएको भनेर दिनहुुँ मानसिक तथा शारिरिक तनाव दिएपछि झापाकि युबतिले गरिन आत्महत्या
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ०१, २०७८ समय: १६:३४:२६
झापाको दुधेदेखी दक्षिण ब्याङ डाडा माइती भएकी यी चेलिको बिबाह शिवगन्ज भएको रहेछ । बिहे भएको केही दिन पछिदेखी श्रीमानले दा’इजो नपाएको भनेर दिनहुुँ मा’नसिक तथा शा’रिरिक त’नाव
दिनेगरेको माइती पक्षको आ’रोप छ । उनले उक्त त’नाव खप्न नसकेर माइतिमा आएर आ’त्मह’त्या गरेको कुरा खुल्न आएको छ । शरीर भरी नि’लडा’म लिएर आफ्नो ज्या’न जो’गाएर माइती आएकी चेली आ’त्मह’त्या गर्न बिबस हुन्छिन ।
आ’खिर किन ?? अनि कहिले सम्म ?? यस्ता घ’टना हुने हो ?? सम्ब’न्धित सरोकारवाला निकाय, पत्रकार महोदय, स्थानिय सरकार, मानव अधिकारकर्मी लगायत सम्पुर्ण जनसमुदाय प्रती सत्य तथ्य तथा न्यायको लागि पहल गरिदिनुहुन अनुरोध ।
सत्य कुराको छानबिन गरि दो’षीलाई कानुनी दा’यरामा ल्याउनको लागि सबैले पहल गरिदिनु होला ।चितवनबाट हराएकी युवतीलाई प्र’हरीले उ’द्धार गरेको छ ।
पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१३ की १९ वर्षीया दिपशिखा तिवारी गत वैशाख १ गतेदेखि घरबाटै हराएकी थिइन् । उनका बुबा किरण चन्द्रले हु’लियासहित खोजतलासका लागि प्र’हरीमा निवदेन दिएपछि उनको खोजी व्यापक पारिएको थियो ।
सादा पोशाकमा समेत प्र’हरी टोली परिचालन गरिएको थियो ।अन्ततः चितवन प्र’हरीले बाराको सिमराबाट तिवारीलाई हिजो (बुधबार) उ’द्धार गर्न सफल भएको छ । ती युवतीलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ ।
पछिल्लो समय चितवनबाट युवतीहरु हराउने क्रम बढ्दो छ । चितवनको भरतपुरबाट हरा´एकी गैंडाकोटकी बिना सापकोटा अझै बेप`त्ता छिन् । यस्तै राप्ती नगरपालिका–३ बाट हरा`एकी सुजिता भण्डारी भने मृ’त अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।